Ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo, ny Internet ary ny lalàna - Ny fiantohana valisoa
Home Ny fitiavana, ny firaisana, ny Internet ary ny lalàna
Ny fitiavana, ny firaisana, ny Internet ary ny lalàna dia afaka mifandray amin'ny fomba sarotra. Ny Reward Foundation dia afaka manampy anao hahatakatra ny dikan'ny lalàna ho anao sy ny fianakavianao. Ity misy resaka TEDx mahaliana, Firaisana ara-nofo, pôrnôgrafia ary maha-lehilahy avy amin'ny mpampianatra lalàna amerikana sy reny, Warren Binford izay manatevin-daharana ireo teboka.
Ny teknôlôjia dia mahatonga ny famoronana sy ny fampitaovana sary mampiseho firaisana ara-nofo ho an'ny olona rehetra miaraka amin'ny smartphone, anisan'izany ny zaza. Ny fiakaran'ny tatitra momba ny heloka momba ny firaisana ara-nofo sy ny fomba fandefasana "zero tolerance" ataon'ny polisy sy ny sampam-pitsarana dia niteraka tranga marobe voampanga. Tena mampiavaka ny fanararaotana ara-pananahana amin'ny ankizy.
Ao Royaume-Uni, olona iray manana sary mampiseho firaisana ara-nofo (na iza na iza ao anatin'ny 18 taona) dia mety ho voampanga amin'ny fandikan-dalàna ara-nofo. Tafiditra ao anatin'izany ny iray amin'ireo sehatra ireo, ny olon-dehibe dia mikasa ny hitady firaisana ara-nofo amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny zatovo manao ny "selfies" mitanjaka na tsy mitongilana amin'ny tombotsoam-pitiavana, ary ny fananany sary.
Ao amin'ity fizarana ity amin'ny lalàna The Reward Foundation dia manadihady ireto olana manaraka ireto:
Misintona eo ambanin'ny lalàna Angletera sy Pays de Galles